पैगम्बर मोहम्मद स.को जीवनीलाई नियाल्दा १ :शमशाद आदिल - Aadil Times
३१ आश्विन २०७८, आईतवार १८:२१ | Aadil Times
महीना रबीउल अव्वल को चलि रहेको छ । इस्लामी पात्रो को तेस्रो महीना हो । यो महीनामा नै अन्तिम सन्देस्टा मोहम्मद अहमद स. को जन्म भएको थियो (उहाँ माथि अल्लाहको शान्ति होस) । संसारमा मानवहरूको विकास सँगै पहिलो मानव आदम देखि मोहम्मद सम्म करीब एकलाख चौबीस हजार सन्देस्टाहरू विभिन्न कालखण्ड र क्षेत्रमा आएका छन । सन्देस्टा अर्थात नबीहरू मानिसहरूबाट नै हुने गर्दथे। मानव समाजमा उतपन्न हुने विकृति विसंगतिहरुलाई नियन्त्रण गर्न अल्लाहले तिनै समाजबाट कुनै मानिसलाई सन्देस्टा बनाउने गरेको पाइन्छ । सन्देस्टा भएका सबै नबीहरूको जीवन शुरू देखि अन्तिम सम्म एकेश्वरवादमा आश्रित हुने गर्दथ्यो । हजरत मोहम्मद अहमद पछि अब कुनै सन्देस्टा आउदैनन । ऊनि अन्तिम सन्देस्टा थिए । कुरआनमा भनिए अनुसार ऊनि सन्देस्टा नबी आउने क्रम बन्द गर्ने र अन्तिम नबी थिए।
ऊनि माथि आस्था राख्नेहरुले अनिवार्य रुपमा अन्य नबीहरू माथि आस्था राख्नु पर्दछ। मोहम्मद अहमद को नाम सुने वा पढ़े पछि सल्लल लाहो अलैहे वसल्लम ( “उहाँ माथि शान्ति होस”) भन्ने गरिन्छ ।
चौध सय वर्ष अगाडि जन्मिएका मोहम्मद स. को शिक्षाले हरेक व्यक्तिको जीवनमा दिशानिर्देश गरि रहेको छ ।
संसारमा जन्म लिने हरेक व्यक्तिको लागि जीवन व्यवस्थाको रुपमा मोहम्मदको शिक्षा रहेको छ ।
ऊनि कुनै नया विचार वा पथ को अथवा धर्म को आह्वानकर्ता होइनन ।
प्रथम मनुष्य आदमले आफ्नो अल्लाह को जून विचार,धर्म आफ्ना सन्तानहरुलाई दिएका थिए । त्यहि धर्मको पुर्णतः दिने मोहम्मद अन्तिम पात्र हुन।
मोहम्मद ४०वर्षको उमेरमा नबी भएका थिए। त्यस पछि अल्लाहको मार्गदर्शन अनुसार उनले मानिसहरुमा संसारको सृष्टिकर्ता , मानिसको जीवनको शुरुवात र अन्त्य , मृत्यु पछिको जीवन लगायत विषयमा वास्तविकताको प्रकाश फैलाउन थाले ।
उनको जीवनको मुख्य उद्देश्य मानिस लाई मानिसको गुलामीबाट मुक्त गराएर मानिसको सृष्टिकर्ता अल्लाहको पूजा भक्ति उपासना गर्न तर्फ लगाउनु थियो।
मानिसले मृत्यु पछि परलोकिक जीवनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने तर्फ अग्रसर थियो। उनको जीवनमा शिक्षा शान्ति मेलमिलाप भाइचारा दान उपकार न्याय समानता सुरक्षा समानुभूति जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ। अनाथ गरीब बालबालिकाहरूको संरक्षण व्यवस्थापनमा उनको नीति निर्देशन एकदमै प्रभावित छन ।
उहाँ माथि अवतरण भएको कुरआनको पहिलो वाणी नै शिक्षा हासिल गर्नु माथि जोड़ दिएको छ।
कुरआनमा अल्लाहले शिक्षा आर्जन गर्न, संसारमा रहेका प्रकृति माथि अध्ययन गर्न, विभिन्न चीजबस्तुबारे अनुसंधान गर्न, विचार गर्न मनन गर्न बारम्बार विभिन्न श्लोकहरुमा भनेका छन ।
इस्लाम धर्मले कुरआन र मोहम्मद स. को जीवनीबाट पूर्णतः पाएको छ ।
इस्लामलाई अध्ययन गर्न कुरआन र मोहम्मदको जीवनीलाई प्राथमिक्ताका साथ अध्ययन गर्नुपर्दछ।
समाजिक सभ्यताको सुंदरतामा विकास गर्न, समाजिक संरचना भित्रको सुमधुर सम्बन्ध निर्माण गर्न, राज्य संचालनमा सुशासन कायम गर्न , नागरिक प्रतिको जवाफ़देहिता , पीड़ितहरुलाई न्यायको उचित व्यवस्था र समाजिक विकृतिहरूको निराकरण गर्न मोहम्मद ले बताएका विचारहरू सदैव यो संसारका लागि फ़ाईदाजनक छ ।
महिलाको हक़ , बालबालिका को हक़, मज़दूरको हक, कैदिको हक, बटुवा प्रति दायित्व, किसानहरूको व्यवस्थापन, व्यापार सम्बन्धी नीति, ग्राहक र साहू बीच को सम्बन्ध, प्रशासक र जनता विचको सम्बन्ध , प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण , जनावरहरूको बन्दोबस्त , आमा बुवा प्रति सन्तानको दायित्व , छिमेकीको हक़ अधिकार, राज्य विस्तार र अन्तर-प्रदेशीय सम्बन्ध , हुलाक र नहरहरूको संरचन, फौजीहरूको निर्माण लगायत क्षेत्रमा मोहम्मदको शिक्षाले मार्गदर्शन दिने गर्दछ।
उनको जीवन र विचारको अध्ययन पश्चात अरु कसैको जीवनी पढ़ने र गाइडलिने आवश्यक्ता पर्दैन।
मोहम्मदको शिक्षाले संसारमा शान्ति र विकास हुने मात्र सम्भव छ ।
समाजशास्त्र र पत्रकारिता अध्ययनरत छन ।